सरकारले सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिएन श्रमिकको डेढ अर्ब :: निर्मला घिमिरे :: Setopati
सरकारले सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिएन श्रमिकको डेढ अर्ब
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकको दुई महिनाको योगदान रकम जम्मा गरिदिने भने पनि अझै उपलब्ध गराएको छैन।
कोषमा सूचीकृत श्रमिकको गत जेठ र असारको सामाजिक सुरक्षावापतको रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो। दोस्रो चरणको कोभिड संक्रमणका कारण समस्यामा परेका श्रमिक तथा रोजगारदातालाई पनि राहत हुने गरी सरकारले दुई महिनाको योगदान रकम आफैंले भुक्तानी गरिदिने निर्णय गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले श्रमिकले योगदान गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सूचीकृतमध्ये नियमित योगदान गर्ने एक लाख ५० हजार श्रमिकलाई सरकारले जेठ र असारको योगदान रकम अनुदान दिने उल्लेख गरेको थियो। सो आधारमा सरकारले डेढ अर्ब अनुदान दिनुपर्ने छ। तर यो आर्थिक वर्षको छ महिना पूरा हुँदा पनि सरकारले अझै रकम जम्मा गरिदिएको छैन।
कोषमा महिना सकिएको १५ दिनभित्र योगदान रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नियमित रकम जम्मा नगरे विभिन्न सेवासुविधाबाट श्रमिक बञ्चित हुन सक्छन्।
हालसम्म कोषमा तीन लाख सात हजार छ सय २० श्रमिक सूचीकृत छन्। त्यस्तै १६ हजार चार सय १३ रोजगारदाता जोडिएका छन्। करिब दुई लाख श्रमिकको रकम नियमित जम्मा भइरहे पनि कतिपयको समस्या भइरहेको कोषले जनाएको छ।
१२ अर्ब ३२ करोड बढी योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ। तर सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेको डेढ अर्ब रकम आएको छैन।
‘सरकारले जम्मा गरिदिने त भन्यो, तर अझै पनि रकम आउने छाँटकाँट छैन,’ कोषका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
श्रमिकको रकम भुक्तानीमा ढिलाइबारे हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्यौं।
यसमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले बताए।
‘हामी प्राथमिकताका आधारमा बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। श्रमिकको डेढ अर्ब रकम छिट्टै भुक्तानी गर्छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सेतोपाटीसँग भने।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालययले स्रोत जुटाउन पहल गरिरहेको पनि उनले बताए।
कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट) मासिक जम्मा गर्नुपर्छ। जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न योजनाअन्तर्गत बाँडफाँट हुन्छ।
योगदान रकमको सबभन्दा बढी हिस्सा २८.३३ प्रतिशत रकम बृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुन्छ। जसमध्ये २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत रहन्छ भने बाँकी ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुन्छ। औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि एक प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ०.२७ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ।
के–के सुविधा पाइन्छ?
औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाः
यो सुविधाका लागि कोषमा नियमित तीन महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। यो योजनाअन्तर्गत औषधि–उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्म कोषले उपलब्ध गराउँछ।
सामान्य बिरामी भई औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा वार्षिक २५ हजार रूपैयाँसम्म कोषले प्रदान गर्छ। कुल दावीको २० प्रतिशत रकम भने श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी वा महिला योगदानकर्ता गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च, अस्पताल भर्ना भई प्रसूति सम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, अस्पतालमा सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको छ हप्ता सम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च कोषले बेहोर्छ।
प्रसूति स्याहारका लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत पाइन्छ। पति र पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा भने कुनै एक जनाले मात्र यस्तो सुविधा दावी गर्नुपर्ने कोषले जनाएको छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाः
यसअन्तर्गत योगदानकर्ता रोजगारीजन्य (कार्यस्थल) दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पाइन्छ। रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गराउँदा सम्बन्धित रोजगारदाता वा योगदानकर्ता वा निजको परिवारको सदस्यले सात दिनभित्र कोषलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
जानकारी नगराई कोषसँग सम्झौता भएको अस्पताल बाहेक अन्य अस्पतालमा रोजगारीजन्य दुर्घटनामा उपचार गराएकोमा त्यस्तो उपचारवापत सात लाख रूपैयाँभन्दा बढीको खर्च कोषले नबेहोर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाख रूपैयाँसम्मको मात्र उपचार खर्च बेहोर्छ।
तर अन्य बीमा प्रणालीबाट सात लाख वा सोभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्थामा कोषले कुनै खर्च बेहोर्ने छैन। सोभन्दा कम सुविधा पाउने भए बाँकी रकमको हदसम्म कोषले बेहोर्ने उल्लेख छ।
कार्यस्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा काममा नफर्किँदासम्म पाउनेछन्।
कार्यस्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी अक्षमता भएको योगदानकर्ताको अक्षमताको अनुपातमा श्रमिकले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबर रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको अक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनभर निवृत्तिभरण सुविधावापत मासिक रूपमा कोषले प्रदान गर्छ।
पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ता जीवित रहुञ्जेल हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई योगदानकर्ताले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत बराबर रकम मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ। यो सुविधा कोषमा सूचीकरण भइ कोषले योगदान रकम लिन सुरू गरेको मितिबाट लागू हुन्छ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाः
जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतको दरले जीवनभर निवृत्तिभरण पाउँछन्।
मृतक योगदानकर्ताको अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्तान भएमा सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिकवृत्ति बापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको चालीस प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउँछन्। एकभन्दा बढी सन्तान सुविधा पाउने अवस्थाका भए बढीमा दुई सन्तानलाई आधारभूत पारिश्रमिकको चालीस प्रतिशत रकम दामासाहीले प्रदान गरिनेछ।
कुनै सन्तान निरन्तर अध्ययनरत रहे त्यस्तो सुविधा एक्काइस वर्ष पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने कोषले जनाएको छ। तर निजको बिहे भए वा अध्ययन पूरा भए त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिँदैन।
योगदानकर्ताको पति, पत्नी, छोरा वा छोरी नभएको अवस्थामा आश्रित आमाबुबाले सुविधा पाउँछन्। उनीहरूलाई कोषले योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशत रकम निजहरूको जीवनभर मासिक रूपमा प्रदान गर्छ। आमाबाबु दुवै जीवित भए दुवैलाई दामासाहीले सुविधा दिइन्छ। यी सुविधा कोषमा सूचीकरण भइ कोषले योगदान लिन सुरू गरेको मितिबाट पाइन्छ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाः
यो योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा पाउँछन्। २०७८ साउन एक गते वा सोभन्दापछि कोषमा योगदान सुरू गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुनेछन्।
निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर साठी वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। योगदानकर्ताले १८० महिनाको योगदान नगर्दै साठी वर्ष उमेर पुरा भएमा निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुस्ट पाउने व्यवस्था छ। वा सो रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनभर निवृत्तिभरण पनि लिन सक्छन्।
२०७८ असार मसान्त अगाडि कोषमा सूचीकरण भएका श्रमिक अवकाश योजनामा समावेश हुन्छन्। यो सुविधा अन्तर्गत जम्मा भएको रकम र सो रकममा प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने रकम योगदानकर्ता अवकाश हुँदा वा निजको रोजगारी अन्त्य भएको अवस्थामा एकमुस्ट पाइन्छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाले भुक्तानी पाउँछन्।
त्यस्तै कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तीन वर्ष लगातार योगदान गर्नेले यो सुविधाअन्तर्गत जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १३, २०७८, ०९:१५:००
फुटको संघारमा पुगेको जसपाले बोलायो केन्द्रीय समितिको बैठक
निर्वाचन आयोगले सरकारसँग माग्यो विद्युतीय मतदान मेसिन
विज्ञ भन्छन्- काठमाडौं मेट्रो रेलको अध्ययनमा सरकारले गलत बाटो समात्यो
कांग्रेस नेता कोइराला पक्षको भेला सुरू, तीन विषयमा छलफल हुने
रामचन्द्र पौडेलको आरोप- अर्बौको आर्थिक चलखेलमा सरकारले आयल निगम व्यापारीको हातमा दिने तयारी गर्दैछ
सांसदले भोट हालेर विघटन भयो इजरायलको संसद, तीन वर्षमा पाँचौं पटक आमचुनाव हुने
मध्यरातमा जलाउँदै गरेको किशोरीको शव पर्सा प्रहरीले लियो नियन्त्रणमा
जसपाबाट छुट्टिए को-को जालान् बाबुरामसँग?
रामचन्द्रले देउवालाई भने- सधैं हतार छ भन्नुहुन्छ, सबै काम अलपत्र
आइएमई जनरल र काठमाडौं प्याथ ल्याब र डाइग्नोस्टिक सेन्टरबीच सेवामा छुट सम्बन्धि सम्झौता
निगमलाई ८ अर्बको स्रोत जुट्दै
अब उद्योग दर्तादेखि लगानी झिक्नेसम्मका सेवा अनलाइनबाट
डलर हालसम्मकै महंगो, एक डलरलाई एक सय २६ रूपैयाँ बढी
कोरोनाले रोकिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको काम पुनः अगाडि बढ्ने, चिनियाँ टोली नेपालमा
प्रदिप भट्टाराईले लू उपन्यासमा आधारित फिल्म निर्देशन गर्ने
ऊ लोक सेवाकी विद्यार्थी! राहुल पोखरेल
आफन्त! प्रेम शर्मा
यो सपना बाँड्नेहरूको संसार हो! ध्रुव गौतम
आमा अनुश्का बगाले
ज्ञानी बन्न मन छ प्रशिद्धी भुसाल